Gmail မှာပေါက်ကရတွေ ပို့ တဲ့သူကို Block ရန် [Gmail Tips]
Myanmar IT Resource Forum » GENERAL TECHNOLOGY » » Internet Knowledge » Gmail မှာပေါက်ကရတွေ ပို့ တဲ့သူကို Block ရန် [Gmail Tips]
1 Gmail မှာပေါက်ကရတွေ ပို့ တဲ့သူကို Block ရန် [Gmail Tips] on 9th September 2010, 11:55 am
Gmail အကောင့်(၂)ခုရှိဖို့လိုပါတယ်။
အချိန်အားနည်းတဲ့အတွက် မြန်မာလိုတော့ရှင်းပြတော့ပါဘူး။ဒီအောက်က အတိုင်း တစ်ဆင့်ခြင်းစီ သေချာဖတ်ပြီးလိုက်လုပ်လိုက်ရင်တော့ အဆင်ပြေပါတယ်။ဒါဆို သူ့ ဘက်က ဘာတွေ ဘယ်လောက်ပဲပို့ ပို့ကိုယ့်ဆီကို မေးလ် တွေဝင်မလာတော့ပါဘူး။
ရိုးရိုး Filter လုပ်တာထက် ပိုကောင်းတဲ့ Block လုပ်နည်းလေးပါပဲ.
အမြင်ကတ်လို့Block ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ စ.လိုက်ရအောင်
Step 1 - Signup foraGmail account.
Step2- In your Gmail Settings, go to the accounts tab go to the row titled 'Check Mail Using Pop3' and click on "Addamail account you own" button to enter the account information for your current email address.
Step3- While still remaining in the accounts tab of the Settings dashboard, find the 'Send Mail As' row and click the 'Send Mail From Another Address' button to complete the steps contained there to enable you to continue sending mail using your existing email address
ဖြည့်စွက်ချက်။ ။ဒီအဆင့်မှာ မိမိရဲ့ နောက်ဂျီမေးလ် နာမည် နှင့် ဂျီမေးလိပ်စာဖြည့်
ပြီးတော့ send verification ကို နှိပ်ပါ။ပြီးရင် ၀င်းဒိုးကို မပိတ်ပါနဲ့ ဦး
အတည်ပြုဖို့ အတွက် verification code ဖြည့်ဖို့ ကျန်သေးပါတယ်.အဲဒီအတွက် ခုဏကဖြည့်လိုက်တဲ့ ဂျီမေးလ်အကောင့်ကို
တစ်ခြား browser တစ်ခုသုံးပြီ sign in ၀င်ပါ။
အဲဒီ မေးလ်ထဲ မှာ ဂူဂယ်လ် မှ ပို့ ထားတဲ့ ကုဒ်လေးပါပါတယ်.။
ကဏန်းနံပတ်တွေပါပဲ..။အဲဒါတွေကို ကော်ပီကူးပြီးတော့ ခုဏကနေရာမှာပြန်ဖြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်
Step 8 - Near the search box at the top of the page use the link to 'CreateaFilter.' This opens the 'Filters' tab in the Settings dashboard. Select 'CreateaFilter.' In the From: box add the offending email address. If the offending party has multiple email accounts enter each in the From: box separated by an OR in caps. Proceed to next step by clicking the 'Next Step' button
Block မလုပ်ချင်တော့တဲ့အခါ ဒီအဆင့်မှာပဲ အခု Filter ကို edit ပြန်လုပ်လို့ ရပါတယ်
အပြည့်အစုံကို သူ မူရင်းဆိုဒ် မှာလေ့လာနိုင်ပါတယ်